Fanentanana CCTV mamely ny Google.cn · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2018 2:53 GMT
Ny 18 Jona, namoaka tatitra iray tao amin'ny pejiny voalohany izay miampanga ny Google.cn amin'ny fampielezana votoaty vetaveta ny Foibe Fitaterana momba izay Vaovao Tsy manara-dalàna amin'ny Aterineto ao Shina (CIIRC).
Jason Ng avy any Kenengba nandika ny tafatafan'ny mpianatry ny anjerimanontolo ao amin'ny fizarana faharoa amin'ny tantarany momba ny fanadihadiana ny tetikady fampielezan-kevitry ny CCTV:
Vaovao farany (19 Jona 3:31 hariva): nilaza ny vaovao farany avy amin'ny twitter fa mpikambana ao amin'ny CCTV ilay mpianatry ny oniversite Gao Ye. Tao amin'ny rindrin'ny Xiaonei (endrika Facebook Shinoa), nikarajia tamin'ny ekipa mpanao gazety izy. Amin'izao fotoana izao satria fantatra ny momba azy, nanomboka nanaisotra ny zavatra nosoratany izy. Ity ambany ity ny pikantsary tamin'ny resadresaka talohan'ny namafana azy:
Bilaogera iray hafa, lyngle, nanipika ihany koa fa tsy ara-drariny ny nataon'ny CCTV tamin'ny google.cn ary nampitaha ny valin'ny fikarohana sary teo amin'ny google.cn sy ny baidu.com amin'ny fikarohana ny”mm” (manondro ny hoe tovovavy) izy. Ireto ambany ireto ny pikantsarin'ny fikarohany: